Biafra: Ahịa tọgbọrọ chakoo maka ncheta Biafra - BBC News Ìgbò
BBC Igbo Live: Ahịa tọgbọrọ chakoo iji cheta Biafra
Ihe ụbọchị May 30 pụtara
Otu ndị na-eme ncheta Biafra
Ọtụtụ okporoụzọ tọgbọrọ chakoo
Ndị mmadụ sonyekwara n'Italy
Ndị ụlọakụ mepere n'Umuahia na Owere
Ihe dị na Bọnka Ojukwu
Ndị nọ na London sonyekwara
Nke Chimezie UcheAgbo, Uche Akolisa, Chimamaka Ihenacho na Chioma Obianinwa
Ebisara na 17:03 30 Mee 201817:03 30 Mee 2018
Daalụnụ maka isonyere anyị
Anyị na-ekele ụnụ maka isonyere anyị na mgbasaozi ncheta agha Biafra taa.
Biko sonyere anyị n'ebe ndị a ; bbcigbo.com nakwa na Facebook(BBC News Igbo) na Instagram bụ BBC News Igbo.
Ka o siri gaa na Legọs taa
Na Legos, ncheta Biafra bụ egwu a gwara ọgwa. Dịka ahịa ụfọdụ ndị Igbo na-azụ dịka International Trade Fair fechara efecha, maka ndị ahịa abịaghị, ndị ọzọ dịka Balogun, Idumọta, Trinity, Berger, Alaba International kworo ekwo ka na ọ nweghị ihe na-eme.
Otu onye BBC Igbo gwara okwu na-achọghị ka a kpọọ aha ya kwuru na o wutere ya na ndị nọ na Legos esonyechaghi na ya bụ nọrọ n'ụlọ maka na ya bụ onye Biafra n'obi ya.
Foto a bụ ahịa Alaba na Legos zụrụ nke ọma taa
Ebisara na 16:19 30 Mee 201816:19 30 Mee 2018
Lee ihe Ojukwu kwuru
Okwu Ojukwu oge o kwupụtara nnwereonwe Biafra n'afọ 1957.
Nnwereonwe ahụ butere agha Biafra a lụrụ na Naịjirịa afọ atọ.
Ebisara na 16:05 30 Mee 201816:05 30 Mee 2018
Ndị Igbo nọ na Lọndọn na-enwe ọṅụ karịa taa
Lee ihe onyonyo ndị Igbo nọ na London na-egosi etu ha si eme mmemme ncheta nke ha.
Ebisara na 15:45 30 Mee 201815:45 30 Mee 2018
Ncheta Bịafra na Lọndọn
Obi aṅụrị na ịgba egwu juru ndị nọ na Lọndọn ahụ dịka ha na-eme ncheta Biafra taa.
Ha buru egwu ogene laruo London.
Ebisara na 15:36 30 Mee 201815:36 30 Mee 2018
Kedụ Nnamdi Kanu?
Taa bụ ụbọchị Nnamdi Kanu kwesiri ịpụta bịa duo ndị otu ya n'ime mmemme a mana onweghi onye nụrụ olu ya.
Ajụjụ ọtụtụ kpụ n'ọnụ bụ: Gọọmenti kwuru na ha ejighi ya, ezinaụlọ ya na ndị Ipob kwuru na ha amaghị ebe ọ nọ, kedụzi ebe ọ nọ?
Onye ga-eduzi ndị ya?
Ahụbeghi Nnamdi Kanu kemgbe ọnwa Sepụtemba afọ 2017 oge ndị agha Naịjirịa wakporo ụlọ ya n'ỤmụahịaImage caption: Ahụbeghi Nnamdi Kanu kemgbe ọnwa Sepụtemba afọ 2017 oge ndị agha Naịjirịa wakporo ụlọ ya n'Ụmụahịa
Ebisara na 15:20 30 Mee 201815:20 30 Mee 2018
Lee ahịa Arịarịa n'Abịa steeti
Lee foto ahịa Arịrịa nke Okwamba Primuh zitere anyị.
Ahịa a bụ ebe a ma ama na-ekwo ekwo oge niile mana maka ncheta a taa, ọ tọgbọrọ chakoo
Okwamba PrimuhCopyright: Okwamba Primuh
Ebisara na 15:04 30 Mee 201815:04 30 Mee 2018
Biafra abụghị maka naanị ndị Igbo
Euphemia Udanoh na-ekwu na ọbụghị naanị ndị Igbo bụ ihe na-eme ncheta Biafra, o kwukwara ndị kwesiri isonye na ya bụ mmemme.
Ebisara na 14:44 30 Mee 201814:44 30 Mee 2018
Nwunye Nnamdi Kanu amaghị ebe di ya nọ
Nwunye Nnamdi Kanu gwara BBC Igbo na mbido afọ 2018 na ọ hụbeghi di ya anya kamgbe afọ 2017 ndị agha Naịjirịa wakporo be ha n'Abia steeti. Di ya bụ Nnamdi Kanụ bụ onyeisi otu n'ime otu na-akwado Biafra bụ Ipob.
Kanu na-efu efu kamgbe ọnwa September afọ 2017 mana ndị gọọmenti Naịjirịa ekwuola na ha amaghị ebe ọ nọ.
Video caption: Nwunye Nnamdi Kanu: Amaghị m ma di m ọdị ndụNwunye Nnamdi Kanu: Amaghị m ma di m ọdị ndụ
Ebisara na 14:29 30 Mee 201814:29 30 Mee 2018
Lee etu ndị nọ na London si eme ncheta nke ha
Ihe onyonyo a na-egosi etu ndị Igbo nọ na London si eme ncheta Biafra taa na Trafalgar Square dị na London.
Ebisara na 14:14 30 Mee 201814:14 30 Mee 2018
Etu ndị mmadụ si eme ncheta a na sosha midia
Ọtụtụ ndị mmadụ na-ekwu etu agha Biafra si metụta ha ma na-egosikwa etu ha si echeta ya bụ agha.
Nkiruka Nistoran nọ n'igwe twitter gosi akụkụ ebe ọ nọ.
Ebisara na 13:54 30 Mee 201813:54 30 Mee 2018
Ụjọ mere ndị mmadụ apụtaghị na Nnewi
Ụfọdụ ndị pụtara ahịa na Nkwo Nnewi kwuru na ọ bụ ụjọ mere ọtụtụ ndị mmadụ apụtaghị ahịa.
Onye setere anyị ihe onyonyo a bụ Nwabueze Nwaonwu.
Video caption: Egwu mere ụfọdụ apụtaghị ahịa n'ahịa ọgbuawa na Nkwọ NnewiEgwu mere ụfọdụ apụtaghị ahịa n'ahịa ọgbuawa na Nkwọ Nnewi
Ebisara na 13:30 30 Mee 201813:30 30 Mee 2018
Ihe dị omimi a hụrụ n'ime bọnka Ojukwu
BBC Igbo bara n'ime bọnka Ojukwu ebe e dewere ihe ndị e ji lụọ agha Biafra na ihe ndị ọzọ.
Video caption: Kedụ ihe ụbọchị Mee 30 pụtara ndị Igbo?Kedụ ihe ụbọchị Mee 30 pụtara ndị Igbo?
Ebisara na 13:15 30 Mee 201813:15 30 Mee 2018
Ụlọakụ mepere taa n'Owere
Vivian DuruakuCopyright: Vivian Duruaku
Ndị ọrụ bekee gara ọrụ n'Imo steetiImage caption: Ndị ọrụ bekee gara ọrụ n'Imo steeti
Ebisara na 13:00 30 Mee 201813:00 30 Mee 2018
Udo dị n'Imo steeti
Andrew Enwerem bụ kọmishọna ndị uweojii n'Imo steeti gwara BBC Igbo na ihe niile na-aga etu o kwesịrị.
Na onye ji maka 'onye ọbụla nọrọ n'ụlọ ya' mechie ahịa ya, mere ya onwe ya.
Video caption: Ndị uweojii n'Imo steeti kwuru n'udo dị na steeti ahụNdị uweojii n'Imo steeti kwuru n'udo dị na steeti ahụ
Ebisara na 12:50 30 Mee 201812:50 30 Mee 2018
Ndị Umuahia esoghị mee #sitathome
Akachi Okoro ziteere anyị foto gosiri na ndị ụlọakụ mepechara n'Umuahia.
Akachi OkoroCopyright: Akachi Okoro
Ọrụ na-aga etu o kwesịrị n'UmuahiaImage caption: Ọrụ na-aga etu o kwesịrị n'Umuahia
Ebisara na 12:33 30 Mee 201812:33 30 Mee 2018
Ndị ọzọ na-akatọ #sitathome
Tupu taa eruo, Ndị Arewa Consultative Forum kwuru na ọ ga-adị mma ka ndị gọvanọ ọwụwa-anyanwụ dọọ ndị Ipob aka na ntị maka na 'onyenọrọnụlọ' ha chọrọ ime adịghị mma maka ndịnotu Naịjirịa.
Ebe ndị uweojii Anambara steeti kwusiri ike na Ipob bụ otu a machịrị amachị nke mere na ha enweghị ike ịgwa ndị mmadu pụta bịa mee ngagharịiwe. Ndị Ipob na-ekwu na ndị uweojii enweghị ike ịkwụsị ncheta ha chọrọ ime maka ndị nwụrụ n'ihi Biafra.
Ebisara na 12:23 30 Mee 201812:23 30 Mee 2018
Ọgbọ osisi dị na Port Harcourt tọgbọ chakoo
Eze Ndu ziteere anyị foto o sere na Port Harcourt taa
Ndị na-azụ ahịa n'ọgbọ osisi dị n'Obigbo dị na Port Harcourt apụtaghị n'ọgbọ taa.
Eze NduCopyright: Eze Ndu
Ebisara na 12:06 30 Mee 201812:06 30 Mee 2018
Ihe ndị mmadụ na-ekwu na Twitter
Otu nwaanyị si na Rumuokoro na Rivas steeti na-agwa ndị mmadụ na ha agahị anwụ ma ha nọrọ n'ụlọ otu ụbọchị
Ebisara na 11:34 30 Mee 201811:34 30 Mee 2018
Ndị isi ọwụwa-anyanwụ na-akatọ #sitathome
Tupu taa eruo, Gọvanọ Ebonyi steeti bụ David Umahị gwara ndị Ebonyi ka ha ghara iso n'oku onyenọrọbeya nke otu Ipob kpọrọ taa maka ncheta Biafra na steeti ahụ.
Umahi kwuru sị "Onye ahịa ọbụla mechiri ọdọahịa ya ga-emechị ya ebighebi. Onye ọbụla dara iwu a ga-ata ahụhụ. A na m agwa ndị Ebonyị ka onye ọbụla gawara onwe ya mkpa ya na-enweghị nsogbu ọbụla."
Dịka ndị ABS si kwuo, Gọvanọ Anambra steeti bụ Willie Obiano kwuru na taa bụ ụbọchị 30 nke ọnwa Mee abụghị ụbọchị ezumike, ma kwuo ka ndị ọrụ oyibo niile nọ na steeti ahụ laghachi ọrụ.